HomeHoryaalladaBarca oo dirqi kaga badbaaday guul La’aantii 4-aad oo xidhiidh ah
Laacibka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ka badbaadiyey guuldaradii afraad oo xidhiidh ah naadigiisa, kadib markii ay Catalanku guuldaro 2-1 ah Nou Camp uga xambaariyeen kooxda Athletic Bilbao caawa.
Messi ayaa daqiiqadii 74 aad ee ciyaarta s
habaqa dhex dhigay gool kubad loo dhigay xariiqda ganaaxa meel u jirta wax ka yar Talaabo, kaad oo noqday goolka guusha ee Barca u horseeday inay wali sii cidhiidhsato kaalintay ku leedahay ku dagaalanka horyaalnimada ee ay kula jirto kooxaha reer Madrid ee Real Iyo Athletico.
Dhawaaqa iyo sawaxan garoonka weyn ee Nou Camp ayaa markaliya demay kadib markii shabaqa Barcelona uu taabtay gool daqiiqadii 49 aad ee ciyaarta Aritz Aduriz u saxeexay Athletic Bilbao, waxayse taageerayaashi neefi ka soo booday markii ciyaartu maraysay 72 oo uu barbareeyey weeraryahan Pedro Rodriguez.
Garoonka Camp Nour ayaa ruxmay oo gilgishay laba daqiiqo kadib goolka Pedro, markaas oo Messi oo aan indhawayd gool dhalini goolkii guusha u saxeexay Barcelona.
Barca ayaa Hogaanka wali kaalinta labaad fadhida oo leh 81 dhibcood, waxaanay 4 dhibcood ka hooseysaa kooxda Hogaanka Haysa ee Atletico Madrid, halka Real Madrid oo ciyaari baaqi u tahay ay leedahay 79 dhibcood.
Robin van Persie Oo dhakhaatiir loo dirayo si loo hubiyo inuu ciyaari karo kulanka Spain Ee K/ Aduunka
Pique: Barcelona Meeqaam Liita Ayay Dhigtay Fabregas